Musharaxa Saleebaan Axmed Ciise Oo Maanta si weyn loogu soo dhaweeyey Magaalada Boosaaso.+Sawiro
Sawirada Soo Dhaweynta Daawo....
Boosaaso:-Dr Saleebaan Ciise Axmed ayaa saaka abaaro 10:30 subaxnimo ka soo dagay garoonka magaalada ganacsiga puntlnad ee Boosaaso,iyada oo si heer madaxweyne ah loo dhigay Roog cas,taasi oo noqtey markii ugu horaysey ee musharax loo sameeyo.
Kadib markii uu musharaxu Salaan iyo mahadnaq u soo jeediyay Dadwaynihii ku soo dhaweeyay garoonka magaalada boosaaso ayaa waxaa safar dheer oo laga soo anba qaaday garaanka diyaaradaha lagu soo maray wadooyinka iyo xaafadaha magaalada boosaaso,waxaana goobkasta oo uu marayey ku salaamayey dadweyne faraxsan
Mudo gaaban kadib markii uu Musharaxu ku nastey Hutel Filij oo ka mid ah Huteelada Puntlnad ugu waa weyn,ayaa waxaa uu hadal dheer u jeediyey kumanaan dadweyne ah oo iskugu yimi banaanka hore ee Huteelka,waxaanu musharaxu u sheegay dadweynihii in xiligan la gaadhay waqtigii ay Punt land la jaanqaadi lahayd caalamka.la?na raadin lahaa isbadal horumar u horseeda bulshada.
Sidoo kale musharaxo wuxuu hoolka huteelka shirar kula yeeshay Isimo,cuqaal iyo waxgarad reer Puntland ah,waxaana halkaasi ugu horayn ka hadlay Musharax saleebaan Ciise Axmed.
Obama Off Punt land waxaa uu ku dheeraaday sida xiligan Puntlnad ay ugu baahan tahay is badal badhaadhe u horseedabulshada reer Puntland,wuxuuna intaas ku daray in uu maanta u taagan yahay xilkan dhibka badan,ayna ku dhalisay kadib markii uu arkay baahida loo qabo in la helo hogaan tayo leh.
Aw Daahir Xaaji Xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Beelaha SSC ay yihiin kuwii dhidibada u taagay Puntland,ayna sadex jeer oo isku xiga hogaanka Puntlnad u doorteen Beesha Majeerteen,sadaxdiina midhahoodii la arkay.
Wuxuu intaas ku daray in xiligan Punt land ay meel adag marayso,qaylo dhaan badanna ay u timi beesha ssc oo lagaga codsanayo in la badbaadiyo Puntland,waxaanu intaas raaciyey in maanta Puntlnad lagu dabo qaban karro, Kursiga oo Beesha Majeerteen ay meel iska dhigaan, Beelaha sscna hogaanka loo dhiibo,taas ayaa ah ayuu yidhi aw daahir xalka kaliya ee lagu ilaalin karo midnimada Puntland.
Suldaan Maxuud Axmed xooyti oo ka mid ah Isimada Gobolka Bari oo kulan kaasi oo xidhay ayaa si qiimo badan uga garaabay una qiray Hadalkii Aw-daahir Xaaji Xasan,waxaanu sheegay in Beelaha Majeerteen ay kurisga iyo hogaanka Puntlnad ku fashilmeen,sidaa darteena loo baahan yahay in Beelaha kale fursan la siiyo.
Musharax Saleebaan Ciise Axmed (Obama Off Puntland) ayaa la filayaa in uu si dhaqso ah ugu gudbo magaalada Garoowe oo ay haatan ku sugan yihiin dhamaan Isimada SSC,iyo musharaxiinta u loolamaya hogaanka Puntlnad.
Ololaha Doorashada Dr Saleeban Ciise Axmed